Umzi mveliso weVelashape oMiselweyo | China Velashape Body Contouring Abavelisi kunye nabaXhasi
I-Kuma Shape Pro 5-In-1 yeQumrhu ...
Yakha umsipha kunye nokutsha ...
ICoolplas Cryolipolysis Fat ...
Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Icebo lidibanisa ubuchwepheshe obuninzi be-Multipolar kunye ne-Bipolar RF ene-Vacuum, i-40K Cavitation kunye ne-Lipolaser.
I-Multipolar kunye ne-Bipolar RF ene-Vacuum
I-Multipolar RF ehambileyo ihambisa amandla ashushu ngokunzulu kwi-derma layer, kwaye icela ukufaka amaza ombane ukubuyisela iinkqubo zomzimba. Inika iziphumo ezifanelekileyo zonyango kwi-cellulite, ukukrola umzimba kunye nokuhlaziywa kwe-collagen.
Ngentloko yesandi esomeleleyo esidibeneyo, isandi esomeleleyo se-40KHZ sinokukhutshelwa ukuhambisa iiseli ezinamafutha ngesantya esiphezulu kwaye zivelise iipokotho zomoya ezincamathelayo ngaphakathi nangaphandle kweeseli ezinamanqatha, iiseli ezinamafutha ezinefuthe elinamandla lokuvelisa ukuqhushumba okungafunekiyo kunye nokuhlakaza i-triglyceride kwi-glycerol kwaye isimahla iiasidi ezinamafutha.
Eyaziwa ngokuba yi-laser ethambileyo, i-laser ebandayo okanye unyango olusezantsi lwe-laser, i-lipolaser isebenzisa ukukhanya kwe-650nm yamandla e-laser ukungena esikhumbeni, xa iiseli ezinamafutha zilinganiswa, inwebu yeseli iya kwenza ii-pores zikhuphe ii-acid kunye ne-glycerol. Iiseli ezinamanqatha ziya kutshiswa okanye zikhutshwe kukujikeleza kwe-lymph kunyango lwe-infrared.
I-Ultrabox 6 KWI-1 Cavitation RF Umatshini omncinci
Umatshini wamkela iliza le-ultrasonic ukufezekisa iziphumo ezilindelweyo zokususa amanqatha, sisiphumo seCavitation. Ngokusebenzisa izinto ezikhuselekileyo nezingafunekiyo zokuqhumisa kwizicubu ze-adipose, lo matshini ubonakalisa inkqubela phambili enkulu kwezobuchwephesha kunye nophuhliso olutsha lwetekhnoloji yokuphelisa umhlaba.
Umatshini omncinci weCavitation RF unokuyidubula ngokukuko i-Cellulite. Ukujolisa kumaza aphezulu e-acoustic, ivelisa umphumo weCavitation ukuqhushumba i-Cellulite, ngokudala amaqamza amancinci amancinci ngaphakathi kweeseli ezinamanqatha ezithi zibangele kwaye zibangele ukuba iseli enamafutha yonakaliswe,
ngaloo ndlela likhupha lonke ulwelo olunamanqatha ngaphandle kokulimaza naziphi na izicwili zomzimba, ezinje ngemithambo yegazi kunye nenkqubo ye-lymphatic. Emva koko, umzimba uqaphela iiseli ezinamanqatha ezonakeleyo kunye nolwelo njengeetyhefu kwaye emva koko uzisuse emzimbeni ngokusebenzisa iinkqubo ze-lymphatic kunye nemithambo yegazi. Ngaphezu koko, inokuqinisa ulusu kunye nomzimba, kuvuse amandla emisipha.
Ngeli xesha, gcina inkangeleko yolutsha. Inkqubo yethu yeCavitation iqulathe umatshini wokubamba, isiqwenga sonyango sonyango lweliza, iBipolar / iTripolar yentloko yonyango kunye nezinye izinto zokugcina. Umatshini wokubamba ufakelwe ii-intshi ezingama-8 ze-LED ekhanyayo engamanzi ekhanyayo kunye namaqhosha okuqalisa. I-LCD ayisiyoseto kuphela, kodwa ikwabonisa ipharamitha kunye namaxesha onyango.
I-Kuma Shape Body Umatshini ojikelezayo
I-Kuma Shape Body Contouring Device ziinkqubo zokwenziwa kwenkqubo yokunciphisa amanqatha adibanisa amaza omoya, ukukhanya kwe-infrared kunye ne-vacuum kunye ne-mechanical roller roller, iitekhnoloji ezine kumatshini omnye.
Amandla afudumeza indawo ephathwayo, efikelela kwiidipozithi ezinamafutha phantsi kolusu. Iiseli ezinamafutha ziyanyibilika kwindawo enyangiweyo ngexesha lonyango ukuze kufezekiswe ukunciphisa ukutyeba kwamafutha.
Ukuhamba rhoqo kweRadio (i-RF) enee-roller ezimbini kungangena ngaphakathi ku-0.5-1.5 cm ngaphantsi kwesikhumba ukuze isebenze kwithishu ye-adipose ngokufanelekileyo.
Ukukhanya kwe-infrared kunokufudumeza izicwili ezinxibelelanayo zokukhawulezisa ukwenziwa ngokutsha kwe-collagen kunye ne-elastic fibers. Inokuphucula ukujikeleza kwegazi kunye nokujikeleza kwe-lymph ukukhuthaza imetabolism.
Isitshixo esitshintshatshintshayo sinokufunxa indawo ekujoliswe kuyo kwisithuba esiphakathi kweeroli ezimbini eziyinyani ii-electrode ezi-2. Oku kunokwenza unyango ngokuchanekileyo nangempumelelo.
I-auto-rollers ikwaphulula nendawo ephathwayo ukukhupha ukudinwa kunye nezihlunu ezibuhlungu. Yonke le nkqubo ifudumele kwaye ihlale kamnandi.
I-Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Umatshini oQinisekayo weBhunga
I-Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Icebo ligxile ekubumbeni umzimba, ekuqinisekiseni kwakhona nasekunciphiseni amafutha.
a) Ukubumba umzimba: Injongo kukutshintsha umzimba ugxile kwiindawo ezinengxaki. Ikwabonelela ngokuphuculwa kokujikeleza kwe-venous, i-lymphatic drainage, ukukhuthaza i-collagen kunye ne-elastin.
b) UkuNcitshiswa kwamafutha: Iyancitshiswa ukusuka kwi-70 ukuya kwi-80% ye-cellulite.
c) Ukuqinisekisa kwakhona: Ngokunciphisa ukubonakala kwe-cellulite kunye nokuphula i-adiposities yendawo, ulusu luphulukana nethoni kwaye luye lube sisiqhwala esincinci, imeko elwa nolu nyango.
I-Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Icebo isebenzisa ubuchwephesha obuninzi beCavitation, iRadio Frequency, ukukhanya kwe-infrared, uxinzelelo olubi kunye noMatshini ojikelezayo.
I-Kuma Shape Pro 5-In-1 Umatshini oQinisekayo weBhunga
Isixhobo seKuma Shape Pro esiSebenzayo esiDibanisa isixhobo sisebenza ngokudibanisa iitekhnoloji ezi-5: iRadio Frequency, i-infrared Light, iCavitation, uxinzelelo olubi kunye noMatshini ojikelezayo.
Unyango yinkqubo engeyiyo eyokuhlasela, esebenzisa isitshixo sokuphefumla esibi sokuphakamisa i-epidermis, i-derma kunye namafutha angaphantsi, emva koko ubopha kwaye wolule izicwili ezihlanganayo kwi-cortex eyahlukeneyo, enokuthi yaphule amanqatha angaphantsi kwaye icofe isitya se-capillary, kwaye ikhuthaza imetabolism yethishu ngokukhawulezisa amatyeli amane. Amandla afudumeza indawo enyangiweyo efikelela kwi-43º Celsius Degree, ebangela ukuvelisa ii-acid ezinamafutha. Amanqatha e-asidi anyibilikisa iiseli ezinamafutha kwindawo enyangiweyo ngexesha lonyango. Iiseli ezinamanqatha ezonakalisiweyo ziya kukhutshwa emzimbeni ngokusasazeka okuqhelekileyo kwemetabolism.
Ngobukhulu obahlukeneyo beentloko zonyango, oludibanisa iitekhnoloji ezi-5, unyango lwenziwa, oluqulathe uthotho lweeseshoni ezi-5 ukuya kwezi-10 kwiindawo eziza kunyangwa ixesha elinemizuzu eli-15 ukuya kwezi-2, kuxhomekeke kwinani leendawo. .